On January 28, 2019 January 28, 2019 By Kashia
အခုခေတ် K-popper တွေကို လီဆိုရာကိုသိလားလို့ မေးကြည့်ရင်တော့ သိတဲ့သူကတော်တော်မှ တော်တော်လေး ရှားပါတယ်။ လီဆိုရာ ကတော့ ballad, jazz သီချင်းအမျိုးအစားတွေကိုပဲ ဆိုလေ့ရှိတဲ့ အဆိုတော်ကြီးတစ်ယောက်ပါ။ View this post on Instagram 2019 첫 작업. First work of the year. — ‪신청곡 (Song Request) ft. Suga‬ […]
Music NewsCollaborationkoreakpopLee SoraNew Releasenew songSUGATabloLeaveacomment
On January 28, 2019 By Aminnyar
AJ McLean, Kevin Richardson, Nick Carter, Brian Littrell နဲ့ Howie Dorough စတဲ့ Backstreet Boys အဖွဲ့သား ၅ ယောက်တို့ဟာ ၂၀၁၉ နှစ်ဦးအစမှာ သူတို့ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တခြားကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ BSB အဖွဲ့ရယ်လို့ အတိုကောက်ခေါ်ကြတဲ့ Backstreet Boys အဖွဲ့ဟာ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တုန်းက သူတို့ချစ်တဲ့ […]
Music Newsboy bandCelebrityMusic VideoNew ReleaseNomination ListplaylistLeaveacomment
တင်လှုပ်အကတွေကို မူးခါနေအောင် မြင်ရမယ့် Cardi B နဲ့ City Girls တို့ရဲ့ Music Video အသစ်
On January 21, 2019 January 21, 2019 By Aminnyar
Cardi B & City Girls
၂၀၁၈ တစ်နှစ်လုံးမှာ ဂီတ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ရရှိခဲ့သလောက်… ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ၊ ရန်ပွဲတွေ၊ အိမ်ထောင်ရေး အရှုပ်အထွေးတွေ များခဲ့ရတဲ့ နာမည်ကျော် အမျိုးသမီး Rapper ကို ပြပါဆိုရင် Cardi B ကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးပြီး ပြရမှာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း လသားအရွယ် သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်တဲ့ ၂၅ နှစ်အရွယ် Cardi ရဲ့ စန်းနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေက […]
Music NewsCelebrityHip-Hop / RapMusic VideoNew ReleasePeopleYouTubeLeaveacomment
နှစ်သစ်မှာ သီချင်းအသစ်နဲ့ ပရိသတ်တွေဆီ ပြန်လာတဲ့ Westlife
On January 15, 2019 January 15, 2019 By Aminnyar
ဟိုးအရင်တုန်းက အဖွဲ့သား ၅ ယောက်နဲ့ စတင်ခဲ့ပေမယ့် အခုလက်ရှိမှာတော့ အဖွဲ့သား ၄ ယောက်ပဲ ကျန်ရှိတော့တဲ့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက ကိုလူချော ၄ ယောက်တို့ရဲ့ Westlife အဖွဲ့ဆီက သီချင်းသစ်တွေ ထွက်မလာတော့တာဟာ ၈ နှစ်လောက် ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Greatest Hits နာမည်နဲ့ Album ဟာ သူတို့အဖွဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ Album မို့ပဲ […]
Music Newsboy bandCelebrityed sheeranMusic VideoNew ReleasePopYouTubeLeaveacomment
The Weeknd နဲ့ Gesaffelstein တို့ ပူးပေါင်းဖန်တီးလိုက်တဲ့ သီချင်းသစ်လေးတစ်ပုဒ်
On January 14, 2019 January 14, 2019 By Aminnyar
ဟောလီးဝုဒ်က Mega Star တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်/ သရုပ်ဆောင်မလေး Selena Gomez ရဲ့ ချစ်သူဟောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသလို၊ လောလောဆယ်မှာတော့ နာမည်ကျော် မော်ဒယ်လ် Bella Hadid နဲ့ တွဲနေဆဲဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် The Weeknd ကတော့ နှစ်သစ်မှာ ဦးဦးဖျားဖျား ဆိုသလိုပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင် သီဆိုပြီး သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Music Video အသစ်လေးတစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေဆီရောက်အောင် ပို့လွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ အဲဒီ […]
Music NewsCelebrityCollaborationDJEDMMusic VideoNew ReleaseYouTubeLeaveacomment
ခွန်အားတွေပေးမယ့် Jlo ရဲ့ သီချင်းသစ်
On January 8, 2019 January 9, 2019 By Aminnyar
၂၀၁၈ မကုန်ခင် အချိန်အတောအတွင်း You Tube ပေါ်ကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ Music Video အသစ်တွေထဲမှာ Jlo ရဲ့ သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်လည်း ပါ၀င်ခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းလေးရဲ့ နာမည်ကတော့ Limitless ပါ။ အများက ချစ်စနိုးနဲ့ Jlo လို့ ခေါ်ကြတဲ့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Jennifer Lopez ကို ၄၉ နှစ်ဆိုတဲ့ သူမရဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်ဖက်အောင် ဒီ MV […]
Music NewsMusic VideoNew ReleaseR&B / SoulYouTubeLeaveacomment
တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ Avril Lavigne ရဲ့ Tell Me It’s Over
On December 29, 2018 December 27, 2018 By Aminnyar
စူးရှတဲ့ အသံချိုချိုလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကို အမြဲလှုပ်ခါနိုင်ခဲ့တဲ့ Avril Lavigne ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တုန်းက Single သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရဲ့ Music Video လေးတပုဒ် You Tube ပေါ် တင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ သီချင်းလေးရဲ့ နာမည်လေးကတော့ Tell Me It’s Over (ဒါဟာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ပြောစမ်းပါ) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Erica Silverman ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားခဲ့တဲ့ Music […]
ဇန်နဝါရီမှာ Comeback လုပ်မှာ သေချာသွားတဲ့ Apink
On December 13, 2018 December 13, 2018 By Cthu
Apink အဖွဲ့ကတော့ သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေ အလိုဆန္ဒပြည့်ဝစေနိုင်မယ့် ကြေညာချက်လေးတစ်ခုကို 2018 Melon Music Awards ဆုပေးပွဲမှာ ပြောဆိုသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒီကြေညာချက်ကို Apink ရဲ့ အေဂျင်စီဘက်ကလည်း အတည်ပြုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ၁ရက်နေ့က ဆိုးလ်မြို့မှာ ကျင်းပသွားခဲ့တဲ့ 2018 Melon Music Awards ဆုပေးပွဲမှာ Top 10 Artists Award ဆုကို လက်ခံရယူပြီးနောက် Apink အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Chorong က “ကျွန်မတို့တွေ […]
Music NewsAwardComebackgirl bandK-PopkoreakpopNew ReleaseLeaveacomment
တစ်ကိုယ်တော် Album အသစ် ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ Zayn Malik
On December 12, 2018 December 13, 2018 By Aminnyar
Zayn Malik & Nicki Minaj
One Direction အဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Zayn Malik ဟာ သိပ်မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ သူ့ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် Album အသစ်က ထွက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးတော့ အခုရက်ပိုင်းတွေထဲမှာလည်း Zayn ဟာ သူ့ရဲ့ Instagram နဲ့ Teitter စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ အဲဒီ Album အသစ်အကြောင်းတွေကို ကြေညာထားတာ တွေ့နေခဲ့ရပါတယ်။ NYC album listening […]
Music NewsCelebrityNew ReleasePopR&B / SoulLeaveacomment